ती भाग्यमानी सासु जसलाई नायिका रानी मुखर्जीले आफ्नी जन्मदिने आमालाई जसरी माया र सम्मान दिन्छिन्
January 24, 2018	Comments Off on ती भाग्यमानी सासु जसलाई नायिका रानी मुखर्जीले आफ्नी जन्मदिने आमालाई जसरी माया र सम्मान दिन्छिन्
बलिउडमा सुन्दरी नायिका एेश्वर्य राय र उनकी सासु जया बच्चनबीचको सम्बन्धमा खटपट भइरहेको खबर बाहिर आइरहेका बेला अर्की नायिक रानी मुखर्जी र उनकी सासु पामेला चोपडाको सम्बन्धको चर्चा बाहिर आएको छ । तर यि सासु बुहारीको चर्चा एश्वर्य जयामा भएको खटपटको जस्तो नभइ सुमधुर सम्न्धको कुरा हो । खबर अनुसार रानी मुखर्जीले निर्देशक आदित्य चोपडासँग गुपचुप विवाह गरपछि पहिलोपटक सार्वजनिक …
त्यो कहालीलाग्दो पहिलो विश्वयुद्ध , कसरी सुरु भयो पहिलो विश्वयुद्ध ? (हेर्नुहोस मुटु काँप्ने तस्विरहरु)
January 24, 2018	Comments Off on त्यो कहालीलाग्दो पहिलो विश्वयुद्ध , कसरी सुरु भयो पहिलो विश्वयुद्ध ? (हेर्नुहोस मुटु काँप्ने तस्विरहरु)
इतिहासअनुसार सन् १९१४ देखि १९१९ सम्म युरोप, अफ्रिका र मध्यपूर्व (आंशिक रूपमा चीन र प्रशान्त द्वीप समूह) मा चलेको लडाइँलाई ‘पहिलो विश्वयुद्ध’ भनिन्छ । त्यसबेला ती देश तथा क्षेत्रमा जल, थल तथा आकाशमा समेत लडाइँ मच्चिएको ।n उक्त युद्धमा हिसाबै हुन नसक्ने गरी जन तथा धनको क्षति भएको थियो । त्यही भएर नै उक्त लडाइँलाई विश्वयुद्ध भनेर इतिहासमा लेखियो । …
धनी र कंगाल हुने पुरुषको कानबाटै थाह हुने…. कस्तो छ तपाइको कान ?
January 24, 2018	Comments Off on धनी र कंगाल हुने पुरुषको कानबाटै थाह हुने…. कस्तो छ तपाइको कान ?
आजसम्म त कानको काम सुन्ने मात्र हो भन्ने सोच्नुभएको छ होला । तर समुन्द्रसास्त्रको मान्यता अनुसार कानका आधारमा मानिसको भाग्य निर्धारीत हुने बताइएको छ । यसैगरी कानकै आधारमा मानिसको ब्यक्तित्व पनि निर्धारण हुने बताईएको छ । यसैकारण तपाईपनि आफ्नो कान ऐनामा हेरेर आफ्नो अवस्था पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ । समुन्द्रशास्त्रको मान्यताअनुसार यदि तपाईको कान छोटो छ भने निकै बुद्धीमानि हुने कुरा …
सुहागरातमा कुमारित्व परिक्षणको विरोध गर्दा भयो यस्तो हाल
January 24, 2018	Comments Off on सुहागरातमा कुमारित्व परिक्षणको विरोध गर्दा भयो यस्तो हाल
यो घटना भारतस्थित पुनेको हो। पुनेमा सुहागरातमा बेहुलीको कुमारित्व परिक्षणको विरोध गर्ने युवाहरुलाई एकै समुदायका अन्य व्यक्तिहरुले नराम्रोसँग पिटेका छन्। यो मामला पुनेको पिंपरी ईलाकाको हो। यो घटना गत आइतबार रात भट नगरको विवाहको क्रममा भएको थियो। ह्वाट्स एप समूह ‘ स्टप दी वी रिचुअल’ का सदस्यहरु सुहागरातको समय गरिने बेहुलीको कुमारित्व परिक्षणको विरुद्द जागरुकता फैलाउने गर्थे। यस विवाहको क्रममा …
January 24, 2018	Comments Off on ढाड दुख्ने र खुट्टा दुख्नेसमस्याबाट छुट्कारा, मात्र यी ५ सरल व्यायामबाट
खुट्टा शरीरको महत्वपूर्ण भाग हो । विभिन्न शारिरीक कसरतहरु गर्दा खुट्टाकै आधार लिनुुपर्ने हुन्छ । त्यसैले खुट्टाको हेरविचार गर्न निकै नै आवश्यक छ । यसले खुट्टा र ढाड दुख्ने समस्याबाट चाडैं छुट्कारा दिलाउँछ । आज हामी तपाईंलाई ५ प्रकारका कसरतहरुको बारेमा जानकारी दिन्छौं । यस व्यायामलाई नियमित रुपमा गर्नसकेमा खुट्टासम्बन्धि विभिन्न समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । १) खुट्टाको औंलाले थिच्ने: …
January 24, 2018	Comments Off on आमिर खानलाई महिला फ्यानले खुलेआम सेक्सको प्रस्ताव राखेपछि: पत्नी किरणले के भनिन् ?
बलिउड सुपरस्टार अभिनेता आमिर खान यति बेला आफ्नो नयाँ चलचित्र ‘ठग्स अफ हिन्दुस्तान’ को छायांकनमा ब्यस्त रहेका छन्। यस चलचित्रमा आमिरका साथै क्याटरिना क्याफ र दंगल फिल्मकी अभिनेत्री फातिमा सना शेखको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। अमिर खान बलिउडमा मिस्टर प्रर्फेक्ट्सनिष्टको नामले पनि परिचित छन्। उनको अभिनय कला समेत अदितिय रहेको छ। अमिरका प्रसंशक भारतमा मात्र नभएर संसारभर रहेका छन्। …
यी महिलाले एक बालिकासँग गरिन् यस्तो काम, सुन्दै पर्नुहुन्छ तपाई आश्चर्यचकित !
January 24, 2018	Comments Off on यी महिलाले एक बालिकासँग गरिन् यस्तो काम, सुन्दै पर्नुहुन्छ तपाई आश्चर्यचकित !
अस्ट्रेलियाको सिड्नी शहरबाट एउटा यस्तो घटना बहिरेको छ, जसले सम्पूर्ण मनिसरुलई आश्चर्यचकित परेको छ। यहाँ २३ बर्षकी रशेल स्मिथ नाम गरेकी महिलालाई एक किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप छ। रशेलले आफ्नो ब्वायफ्रेन्ड म्याथ्यु ब्लेजलीसँग मिलेर १४ बर्षकी बालिकालाई बलात्कार गरेकी थिइन्। सिड्नी प्रहरीका अनुसार, रेशल सिड्नीको हार्न्‍सबाय मलबाट एक १४ बर्षीय बालिकालाई ललाई-फकाई गरेर आफ्नो घर लागेकी थिईन र उता रशेलको …
खाली पेटमा लसुन र मह नियमित रुपमा ७ दिनसम्म प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यमा हुने फाईदा
January 24, 2018	Comments Off on खाली पेटमा लसुन र मह नियमित रुपमा ७ दिनसम्म प्रयोग गर्नाले स्वास्थ्यमा हुने फाईदा
लसुन हामीलाई आवश्यक पर्ने एकदम शक्तिशाली प्राकृतिक उपहार हो । संसारको हरेक भान्छा कोठामा लसुनले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । यसले खानाको स्वाद बढाउने काम गर्दछ । साथै काँचो लसुनको प्रयोगले धेरै रोगहरुबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ । लसुनमा रोगलाई निको पार्ने गुण भएको कारणले गर्दा नै हामीले यस्को प्रयोगबाट रोगको रोकथाम र उपचार गर्न सक्दछौं । शरीरमा देखिनेछ यस्तो अद्भुत …
घरको छाना र गाउँवस्ती हिउँले सेताम्य (तस्बिर सहित)
January 24, 2018	Comments Off on घरको छाना र गाउँवस्ती हिउँले सेताम्य (तस्बिर सहित)
हिमाली जिल्ला जुम्लामा मंगलबार रातीदेखि हिमपात भएको छ । डाँडापाखा र घरका छाना समेत हिउँले ढाकिएको छ । लामो समयदेखि पानी तथा हिउँ नपरेपछि बाली बिग्रिने चिन्तामा रहेका किसान हिउँ परेपछि खुशी भएका छन् । अग्लो ठाउँ भन्दा मानव बस्तीमा हिउँ कम परेको छ । यो हिउँ बालीका लागि पर्याप्त नभएको किसानहरु बताउँछन । किसान रामकृष्ण बुढथापाका अनुसार यो हिउँले …
सम्बन्ध बिच्छेदको बिषयमा मनोज गजुरेलले लेखेको मार्मिक फेसबुक स्टाटसमा पुर्वपत्नी मिना ढकालले लेखिन यस्तो ३ कमेन्ट – हेर्नुहोस
January 24, 2018	Comments Off on सम्बन्ध बिच्छेदको बिषयमा मनोज गजुरेलले लेखेको मार्मिक फेसबुक स्टाटसमा पुर्वपत्नी मिना ढकालले लेखिन यस्तो ३ कमेन्ट – हेर्नुहोस
चर्चित हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिच्छेद भएको कुरा एक महिनापछि सोमबार फेसबुकमार्फत् सार्वजनिक गरे। उनले फेसबुक स्टाटसमा सम्बन्ध बिच्छेदका केही कारणसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। विवाहपछि नै आफूहरुबीच मत भिन्नता रहे पनि सन्ततीको भविष्यका लागि मिलेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे पनि त्यो सफल हुन नसकेको गजुरेलको भनाइ छ। ‘पारिवारिक सहमतिका आधारमा हामीले कानुनी रुपमै छुट्टिने निर्णय गर्यौँ’, गजुरेलले फेसबुकमा …
January 24, 2018	Comments Off on छोरो जन्माउने उपाय पत्रिकाले सिकाए पछि…
छोरा वा छोरी जन्माउने कुरा हामीले चाहेर हुने होइन विज्ञानले भन्छ बच्चाको लिंग पुरुषको शुक्रकिट र महिलाको डिम्बमा रहेको क्रोमोजोमले निर्धारण गर्दछ । महिलाको एक्स क्रोमोजोम र पुरुषको वाइ क्रोमोजोमसँग मिल्यो भने छोराको जन्मिन्छ भने एक्स एक्स अथवा वाइवाइ क्रोमोजोम मिल्यो भने छोरी जन्मिन्छ । तर भारतबाट प्रकाशित हुने पत्रिकाले भने छारा जन्माउने घरेलु तरिका सुझाएपछि त्यो खबर निकै चर्चा …
January 24, 2018	Comments Off on निकै दुखद खबर : एक घण्टाको फरकमा बाबु–छोराको मृत्यु, यस्तो छ निकै दुखदायी कारण
शीतलहरका कारण सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्वर–६ मा बाबु–छोराको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो पटक शनिबार बिहान करिब ९ बजेको समयमा छोरा बासुदेब साहको निधन भएको थियो ।छोराको निधन भएको एक घण्टा पनि नबित्दै बाबु सुभी साहको निधन भएको आफन्तजनले जानकारी दिएका छन् । शीतलहरबाट सप्तरीमा हालसम्म ३० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भईसकेपनि प्रहरीले भने अहिलेसम्म १९ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि …
अब पार्लर धाउनु पर्दैन, घरमै बसेर यसरी चम्काउनुहोस् २० मिनेटमै आफ्नो अनुहार जानी राखौ
January 24, 2018	Comments Off on अब पार्लर धाउनु पर्दैन, घरमै बसेर यसरी चम्काउनुहोस् २० मिनेटमै आफ्नो अनुहार जानी राखौ
अनुहार चम्काउन मानिसले निकै रकम खर्च गर्छन् । व्युटी पार्लर, चिकित्सक लगायतका धाउँदा धाउँदा पनि अनुहारमा चमक आउँदैन । तर कतिपय यस्ता सामाग्री र प्रयोगहरुलेपनि मानिसका छालामा प्रतिकुल असर पर्ने गरेका छन् । तर साइड इफेक्ट नहुने गरि घरमै पनि सौन्दर्यका विभिन्न तरिकाहरु अपनाउन सकिन्छ । जसले अनुहार चमकाउन मद्दत गर्छ । एक चम्चा मह अनुहारमा लगाउने (यसमा ४–५ थोपा …
January 24, 2018	Comments Off on १५०० वर्ष पुरानो भीरमा झुण्डिएको चिनिया मन्दिर, जसले संसारलाई चकित पार्दै (तस्बिर सहित)
करीब २ हजार वर्ष लगाएर बनाइएको (ग्रेट वाल) देखेरै थाहा हुन्छ चिनियाँहरु प्रचीन कालदेखि नै मेहनती थिए । चिनियाँ को मेहनतले बनेको एक प्राचीन मन्दिरले संसारलाई चकित पारेको छ ।चीनको सान्सी प्रान्तमा रहेको एउटा पाइला राख्ने ठाउँ समेत नभएको भीरमा टाँसेर बनाइएको यो मन्दिर हावामा झुण्डिएको जस्तो देखिन्छ । मन्दिरलाई १५ सय वर्ष पुरानो मानिन्छ । बौद्ध, ताओ र कन्फुसियस …
January 23, 2018	Comments Off on गोरो हुन मन छ भने खानुहोस् यी १० खानेकुरा
अनुहारलाई गोरो बनाउनको लागि मानिसहरु धेरै थरि कस्मेटिक सामानहरु प्रयोग गर्ने गर्छौ । तर लामो समयसम्म यस्ता सामानहरु प्रयोग गर्दा हाम्रो स्किन ड्यामेज हुन सक्छ । यसका साथै यसले छालामा क्यान्सर हुने सम्भावना पनि बढ्छ । त्यस कारण गोरो र सुन्दर छालाको लागि कस्मेटिक सामानहरु हैन खानेकुरामा ध्यान दिनु राम्रो मानिन्छ । के के खानेकुरा खाँदा हामी गोरो हुन्छौँ त …
Page 22 of 427« First...102021222324»304050...Last »